अाज महाशिवरात्रि फाल्गुन २७ गते बिहिबार, शिबजीको दर्सन गरि तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल – Kantipur Np
अाज महाशिवरात्रि फाल्गुन २७ गते बिहिबार, शिबजीको दर्सन गरि तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस राशिफल
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण २७, २०७७ समय: ७:१७:०१
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । मध्यान पश्चात कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । तात्कालिन आर्थीक अभाबको सामना गर्नुपर्नेछ । नजीकका ब्यत्तित्वहरुबाट धोका हुनाले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ
Last Updated on: March 11th, 2021 at 7:17 am